O kwere omume ịmata ma ọ bụrụ na iPhone bụ nke mbụ ma ọ bụ adịgboroja n'ụzọ ụfọdụ. Onye nwe ya nwere ike ịlele IMEI (International Mobile Equipment Identification) ma ọ bụ lelee nọmba Oghere Usoro ahụ na weebụsaịtị Apple. Na mgbakwunye, enwere akụkụ anụ ahụ nke na-enyere aka ịmata ma ngwaọrụ a ọ bụ nke ezigbo ma ọ bụ oyiri. N'ime ha, ihuenyo, tiketi na akara ngosi.
Site IMEI na Oghere Usoro ọgụgụ
El IMEI (acrónimo en inglés de Amata ndị otu Mobile Mobile Team) es un número de identificación único para cada teléfono celular. Como si se tratara de un documento de identidad con validez internacional. Ningún otro dispositivo en el mundo tendrá un igual.
Oghere Usoro ahụ bụ koodu nwere leta na ọnụọgụ nke na-anakọta ozi gbasara ngwaọrụ ahụ, dịka ọnọdụ na ụbọchị arụpụtara, ihe atụ, na ndị ọzọ. Ke ofụri ofụri, ọ pụrụ ịchọta n'otu ebe dị ka IMEI.
Na iPhone mbụ, data a dị na igbe, na ahụ nke smartphone, na site na sistemụ arụmọrụ.
N'ihe banyere iPhone
The IMEI na Oghere Usoro ọgụgụ na-esote na barcode na ngwaọrụ igbe. Gaba, a ga-ede ya IMEI ma ọ bụ IMEI / MEID (1) bu Number S (Number) Oghere Usoro (2), na-esote usoro ọnụọgụ ma ọ bụ mkpụrụ akwụkwọ alphanumeric. Stdọ ndị a ga-abụ otu ihe ahụ egosiri na ajụjụ ndị dị n'okpuru.
Site na usoro
Para descubrir el IMEI a través del sistema, solo sigue el camino Ntọala → General → Ihe. Desplácese por la pantalla hasta encontrar el elemento IMEI / MEID mi Numero de serie.
Na iPhone n'onwe ya
IPhone ọ bụla nwere nọmba IMEI debara aha na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya. Ọnọdụ dị iche site na ihe nlereanya. Na ọtụtụ n'ime ha, ọ dị na SIM tree.
Nri ntutu Apple
Puede acceder al sitio web de ID de Apple a través de cualquier navegador de Internet. Simplemente ingrese sus datos de inicio de sesión y luego desplácese hacia abajo hasta la sección Ngwaọrụ. Pịa na ihe oyiyi nke ngwaọrụ ịchọrọ ịchọpụta IMEI na windo ga-emeghe.
Otra forma de descubrir el IMEI es escribiendo * # iri abụọ na otu # na keyboard ngwaọrụ. Ozi ga-akpaghị aka ga-egosipụta na ihuenyo.
Site na ọrụ ahụ Lelee mkpuchi (Lelee mkpuchi)
Apple nwere weebụsaịtị ebe onye ọrụ nwere ike ịlele ọnọdụ nke akwụkwọ ikike Apple na iru eru ịzụta mkpuchi AppleCare ọzọ. Iji mee nke a, ịkwesịrị itinye nọmba Oghere Usoro nke ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na iPhone abụghị nke mbụ, a gaghị amata koodu ahụ. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ọ ga-ekwe omume ịmara ma ụbọchị nzụta ahụ dị irè yana ọ bụrụ na nkwado teknụzụ na ndozi na mkpuchi ọrụ na-arụ ọrụ.
Sistemụ arụmọrụ na ngwa arụnyere
Ekwentị niile nke iPhones na-arụ ọrụ na sistemụ iOS. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịgbanye ngwaọrụ ma ọ bụ gam akporo, o doro anya na ngwaọrụ ahụ bụ adịgboroja. Agbanyeghị, ndị adịgboroja na-ejikarị ngwaọrụ eme ihe ngosipụta nke sọftụwia Apple.
N'ọnọdụ dị otú a, ọ bara uru ịlele ma ọ bụrụ na ekwentị nwere ngwa ndị na-enweghị atụ, dịka Storelọ Ahịa App, ihe nchọgharị Safari, onye enyemaka Siri, n'etiti ndị ọzọ. Iji kpochapụ obi abụọ, ị nwere ike ịlele nsụgharị iOS na ntọala.
Site na enyo
Ndụmọdụ a dị irè karịsịa maka ndị na-azụta iphone nke abụọ. Mgbe ụfọdụ onye ọrụ mbụ nwere ike imebi ihuenyo ahụ ma dochie ya na onye na-abụghị Apple ma ọ bụ ụlọ ọrụ gosipụtara.
Pero, ¿cuál es el problema de usar un monitor que no es original? "Las pantallas que no son de Apple pueden causar problemas de compatibilidad y rendimiento", explica el fabricante. Esto puede significar errores en el multitáctil, oriri batrị dị elu, mmetụ na-enweghị isi, n'etiti ndaghachi azụ ndị ọzọ.
Site na iPhone 11 ọ ga-ekwe omume ịlele mmalite site na sistemụ. Iji mee nke a, na-agbaso ụzọ ahụ Ntọala → General → Ihe.
Ọ bụrụ na ị hụrụ Mensaje importante sobre la pantalla. No es posible verificar que este iPhone tenga una pantalla original de Apple, Ihe mbu dochie nwere ike ọ gaghị etinyere ya.
Featuresfọdụ atụmatụ nke ahụ nke ngwaọrụ nwere ike igosi ma iPhone ọ bụ ezigbo ma ọ bụ na ọ bụghị. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụrụ ihe Apple ngwaọrụ, ọ dị mkpa na ị maara ụfọdụ nkọwa.
Ntinye ọkụ ọkụ
Ebe ọ bụ na iPhone 7, Apple anaghị eji ụda isi okwu ọdịnala na ekwentị ya, nke a maara dị ka P2. Ya mere, ọ ga-ekwe omume iji naanị ndị nwere ụdị ọkụ ọkụ, otu ihe ahụ na-enye gị ohere ịmegharị ekwentị gị. Ma ọ bụ ụdị ikuku, ejikọrọ na Bluetooth.
N'agbanyeghị na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, ọ na-esiri ndị na-emepụta okike na adịgboroja ike imepụta ụdị echiche a. Ya mere, nsonaazụ na-enwekarị ọdịiche dị n'etiti elu na onyinyo nke Apple.
Na ngwaọrụ na aka, ọ ga-ekwe omume iji mpụta ọdịdị ya na nkọwa e mere na weebụsaịtị Apple. Lelee nkọwa dị ka agba dị maka ihe nlereanya ahụ, ọnọdụ bọtịnụ, igwefoto na mgbukepụ, n'etiti ndị ọzọ.
The ụlọ ọrụ ọbụna na-akọwa ụdị imecha. Dị ka "enyo enyo ederede, nke nwere igwe anaghị agba nchara gburugburu," n'ihe gbasara iPhone 11 Pro Max.
IPhones enweghị ụfọdụ ọrụ nkịtị na smartphones sitere na ụdị ndị ọzọ. Ngwaọrụ Apple enweghị igwe onyonyo dijitalụ ma ọ bụ antenna doro anya. Ha enweghị drawer maka kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ dual-sim.
Ntị: ụdị dị ka iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ma ọ bụ mgbe e mesịrị nwere ọrụ ịme anwansị abụọ. N'agbanyeghị na enwere naanị ohere maka otu mgbawa, a na-eji kaadi nano-SIM na kaadị e-SIM, nke bụ ụdị dijitalụ nke mgbawa ahụ.
Kpachara anya maka ọnụahịa dị oke ala
Ọ dị ka ọ bụ ntakịrị ihe doro anya, mana mgbe onyinye ahụ dị oke mma ịbụ eziokwu, ọ dị mkpa ka enyo anyị enyo. Ọ bụrụ n'ịchọta iPhone na ọnụ ala dị ala na ụlọ ahịa akọwapụtara nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi, nwee enyo.
Ọ dị mma ịmara na ụfọdụ ụlọ ọrụ izizi na-erekarị ụlọ ọrụ dị oke ọnụ na ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa n'ihi na a na-egosipụta ma ọ bụ na-emezigharị, a na-akpọkwa ya gbanwee. N'ozuzu, ụlọ ahịa na-egosi ihe kpatara mbelata uru.
Ihe ngosi iPhone, dị ka aha ya pụtara, bụ nke gosipụtara na nwa oge. Nke ahụ bụ, echeghị ya na ndenye ọpụpụ na ọ nwere ike ịnwe akara ụfọdụ n'ihi mmekọrịta ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ.
O kwere omume ịmata site na nọmba ihe nlereanya. Iji mee nke a, gaa Ntọala → Banyere. Ọ bụrụ na nọmba ihe atụ malitere na leta Metro, ọ pụtara na ọ dị ọhụụ. Ọ bụrụ n’ibido n’akwụkwọ ozi F, E megharịrị ya.
Ọ bụrụ na ndapụta ị hụrụ leta ahụ P, ọ pụtara na ahaziri ya ahaziri. Leta ahụ north na-egosi na ọ bụ Apple nyere ya iji dochie ngwaọrụ na-ezighi ezi.